Talooyinka Imtixaanka RHCSA - Sidee U Gudbaa Imtixaanka RHCSA? - ITS Tech School
Talooyinka Imtixaanka RHCSA - Sidee U Gudbaa Imtixaanka RHCSA?
Talooyinka loogu talagalay imtixaanka RHCSA
RHCSA waa qiimeynta ururka nidaamka nidaamka casriga Linux ee macluumaadka iyo dabacsanaanta halka rajada laga qabo la isku dayayo fulinta hawlaha hay'adda. Ka dib markaad hesho shahaadada, waxaad u qalantaa inaad ka shaqeyso xaaladaha Red Hat Enterprise Linux. Si fudud u sii soco oo soo ogow dhawr talooyin oo kaa caawin kara imtixaanka RHCSA.
RHCSA: Maamulaha Nidaamka Red Hat Certified System
Talooyinka ugu dambeeyay ee loogu talagalay imtixaanka RHCSA
Dhiirrigalin la'aanta: Si aad u gudbiso imtixaan kasta, tababarku waa lagama maarmaan. Sidoo kale waa xaaladda RHCSA. Maadaama taasi ay tahay imtixaan gacmeed, ma fahmi kartid fikradaha wadnaha. Iska-ka-beddel kombuyuutarka hadda oo ka shaqee hawsha hawlaha kiis kasta, si fudud oo ku-xig-xigta tilmaamaha. Waa lagama maarmaan in la garto waxa aad dhab ahaantii u baahan tahay inaad sameyso.
Maamulka wakhtiga: Imtixaanka si dhab ah ayuu u socdaa waana inaadan haysan waqti kugu filan. Ka shaqee shaqadaada oo isku day inaad dhammaysato hawlihii shaqo la'aanta ee hore marka la gaaro hadafka aad sare u qaadayso. Ka dib waxaad u tagi kartaa kuwa aad dareensan tahay inay dhib tahay. Maskaxda ku hay in ay ku dadaalayaan inay marka hore isku garaacaan tiknoolaji waqtiganaga sidan oo kale oo aad ku walaacsan tahay.
Baro bartilmaameedyada: Haddii aad tahay maamule guulaystay, waxaad ka heli kartaa qayb ka mid ah meelaha u sahlan. Noqo sidaad u aragto, marka la eego kuwa aadka u adag, waxaad waayaysaa aaminaad. Maskaxda ku hay imtixaanka isku midka ah ee takhasuska ayaa isku duba ridey xaqiiqda ah in ay dayaceen inay fahmaan ujeedooyinka.
Ku dabool dhamaan meelaha: Waxaa jira noocyo badan oo maadooyin oo lagu darey imtixaanka, lagana yaabo inaadan aqoonin wax walba. Waxaad wakhti dheer ka buuxisay maamulaha nidaamka, imtixaanka Maamulaha Nidaamka Cas ee Red Hat wuxuu codsanayaa in ka badan. Maamuluhu wuxuu inta badan diirada saari karaa tirada shaqooyinka la saadaalinayo iyo laga yaabo inaanay awood u lahayn dhulalka ka baxsan meelaha ugu fog. Iyadoo qorsheynta imtixaanka, waxay u baahan tahay riixid si ay u daboosho mid kasta oo ka mida mawduucyada isla markaana fahamto horumarkii ugu dambeeyay.
Walaaca ugu muhiimsan waa in imtixaanka uusan ahayn mid fudud sida aad u maleyneyso. Waxyaabaha lagaa doonayo waxay kugu waajibayaan inaad fuliso hawlo dhab ah oo codsanaya waxbarasho dhammaystiran iyo dabacsanaan. Sidaa awgeed, waxay kuxirantahay dhaq-dhaqaaqa guud si loo hubiyo in aadan masaafo ka fogeyn maadada.
Red Hat IT Sign On (SSO) ayaa ku orday on Red Hat Virtualization